Yaa la siiyey abaal-marinta xiddigii ugu liitay guud ahaa Talyaaniga xilli ciyaareedkii hore? - Barwaaqo TV - Warbaahinta Bulshada Horumarkeeda
Yaa la siiyey abaal-marinta xiddigii ugu liitay guud ahaa Talyaaniga xilli ciyaareedkii hore?
By admin January 14, 2022 9
(Serie A) 14 Jan 2022. Abaalmarinta heshiiskii ugu xumaa ee ciyaaryahan lagula soo wareego Horyaalka Talyaaniga ee loo yaqaan (Calcio Bidone) ayaa waxaa la siiyay ciyaaryahanka Khadka dhexe ee Juventus, Aaron Ramsey.
Ramsey oo loo aqoonsaday laacibkii ugu liitay guud ahaan waddanka Talyaaniga xilli ciyaareedkii hore ayaa waxa uu Juventus kusoo biiray 2019-kii, waqtigaas oo uu ka yimid Arsenal, laakiin dhaawacyo joogto ah ayaa haleelay tan iyo markii uu yimid Talyaaniga, waxaana xilli ciyaareedkan uu u dheelay Juventus 112 daqiiqo oo qura.
Ramsey ayaa abaalmarinta xidigga fashilmay ee Talyaaniga waxa uu ka galay kaalinta 1-aad markii uu helay 2,686 cod, halka kaalinta 2-aad uu galay Muriqi oo Lazio u ciyaara (2,567 cod), kaas oo 20 Milyan oo Euro ay kula soo wareegtay Lazio 2020-kii, 48 kulan oo u ciyaarayna u dhaliyay 2 gool oo qura, kaalinta 3-aadna waxaa ku guuleystay Arthur Melo oo Juventus ka tirsan.
Ciidamada Daraawiishta oo Howlgal ka sameeyay Deegaano dhaca Koonfurta galmudug
Kooxda Real Madrid oo isku diyaarinaysa inay la soo wareego xiddig ka tirsan Juventus
Mauricio Pochettino oo ka hadlay maqnaanshiyaha Neymar Jr ee kulanka Barcelona